Sida loo tafatiro sawirrada Instagram: barnaamijyada iyo barnaamijyada | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 07/06/2021 16:12 | La cusbooneysiiyay 07/06/2021 16:14 | Sawir
Waqtigan xaadirka ah, mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ku jira moodada taas oo lagu gartaa in laga hormariyo sawirka qoraalka waa Instagram. Qof kastaa wuxuu leeyahay koonto oo wuu soo dhejiyaa sawirro, in kasta oo kuwa tayada keliya leh ay yihiin kuwa guuleysta. Taasi waa sababta ay dad badani u raadiyaan xeelado ay ku ogaadaan sida wax looga beddelo sawirrada barta 'Instagram'.
Haddii aad sidoo kale ku jirto raadintaas oo aad rabto inaad ogaato sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo sawirradaada 'Instagram' (Inaad hesho taageerayaal badan, in magacyadu kugu soo ogaadaan adiga, iwm.) Markaa fiiri wixii aan diyaarinnay.
1 Tallaabada ugu horreysa ee lagu kala soocayo sawirradaada barta Instagram
1.1 Shaandheeyaasha 'Instagram' ee kor u qaada sawirradaada
1.2 Fursadaha Instagram
2 Barnaamijyo si wax looga beddelo sawirrada loogu talagalay 'Instagram'
2.1 Sida loo tafatiro sawirrada Instagram: Instasize
2.4 Sida loo tafatiro sawirrada Instagram: Lightroom
2.5 Adobe Photoshop Taabasho
Tallaabada ugu horreysa ee lagu kala soocayo sawirradaada barta Instagram
Instagram ma aha "shabakad yar oo bulsheed." Maanta waxaa jira in ka badan 60 milyan oo sawir maalin kasta, taas oo ka dhigaysa qoraaladaada kuwo aan muuqan karin haddii aadan si sax ah u sameyn. Beddelkeeda, waxaad la xiriiri kartaa in ka badan 500 milyan oo isticmaaleyaal ah oo dul jooga.
Iyo sida loo helo? Hagaag, in kastoo ay umuuqato mid adag, waxaa jira waxyaabo laga qaban karo, maahan oo keliya sida wax looga beddelo sawirrada barta 'Instagram', laakiin dhinacyada kale ee, mararka qaarkood, aan iska indhatirno, sida isticmaalka cabirka saxda ah ee sawirada, ama fiidiyowyada. Ama qaado sawirro tayo leh oo la xiriira koontada aan hayno.
Ujeedadaadu maahan inay noqoto inaad sawiro ka qaaddo oo aad si deg deg ah u dhigto. Laakiin sii xirfad dhameystiran. Taasina maahan inay micnaheedu tahay inuu qof naqshadeeye kaa dambeeyo inuu wax walba dib u hagaajiyo, ama sawir qaade xirfad leh; laakiin fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta qaarkood sida dhalaalka, isbarbar dhiga, miirayaasha, iwm.
Shaandheeyaasha 'Instagram' ee kor u qaada sawirradaada
Kahor intaadan kahadlin codsiyada kaa caawinaya inaad dib ugulaabato sawiradaada Instagram, waa inaad ogaataa aaladaha shabakada bulshada lafteeda ay ku siiso, miyaadan u malayn? Xaaladdan oo kale, waxaan diiradda saareynaa waxa miirayaasha ay yihiin.
Barta 'Instagram' waxaad ku haysataa xaddid miirayaal ah oo hagaajiya tayada sawirkaaga. Waxay kuxirantahay dhadhankaaga, waxaa jiri doona qaar aad jeclaan doonto waxbadan ama kayar. Tusaale ahaan, la Clarendon waxaad leedahay codad aad u daran oo hooska ah, taas oo hagaajinaysa iftiinka sawirada. Ama LARK, oo ku siinaya sawir adiga oo ka saaraya dhereg xad dhaaf ah.
Dhammaan shaandheeyaasha 'Instagram' ayaa isbedela oo hagaajiya muuqaalka sawirkaaga, laakiin sidoo kale waxaa jira xaddidaadyo kale oo hagaajin kara.
Markaad sawir u dhigto barta 'Instagram', kaliya kuu oggolaan meyso inaad shaandho ku dhejiso sawirka; Waxaad sidoo kale leedahay giraangir muujinaysa cabirka sawirka, waadna ku kala duwanaan kartaa si aad u wanaajiso tayadooda. Waa maxay xuduudaha? Waxaan ka hadleynaa dhalaalka, dhererka, diirimaadka, kala duwanaanshaha, hooska ...
Haddii aad wakhti yar ku qaadato inaad ku kala duwanaato xogtaas, waad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho sawirro barta 'Instagram' adiga oo aan u baahnayn inaad rakibato codsi kale. Tusaale ahaan, xaalado badan hoos u dhigaya dhalaalka, isbarbar dhiga iyo laydhadhka ilaa 50 durba waxay si weyn kor ugu qaadayaan muuqaalka sawirka. Wax walba waa tijaabinayaan si loo arko midka ugu fiican xulashada sawir kasta oo aad soo dejiso.
Barnaamijyo si wax looga beddelo sawirrada loogu talagalay 'Instagram'
Haddii aad doorbideyso inaad adeegsato codsiyada si aad dib ugu soo celiso sawirrada barta Instagram halkii aad ka dooran lahayd fursadaha ay shabakaddu ku siiso, waxaan soo diyaarinnay xulasho kuwa ugu fiican ah. Iyaga waxaad lahaan doontaa fursado badan oo aad ku abuuri karto sawirro gaar ah, markaa waxaad u baahan doontaa oo keliya waqti aad ku tijaabiso oo aad u aragto natiijooyinka.
Tani waxay ka dhigi kartaa koontadaada mid taagan, sidaa darteed waqti ku filan inaad siiso sawirro tayo leh oo saameyn ku leh waa maalgashi mustaqbalka, gaar ahaan haddii aad bilowdo inaad aragto kuwa raacsan oo kor u kacaya.
Sida loo tafatiro sawirrada Instagram: Instasize
Waxaan ku bilaabaynaa codsi ah waxay si toos ah diirada u saareysaa sawirrada aad soo dhigatid barta Instagram. Xaaladdan oo kale waxaad abuuri kartaa isku-darka ama geli kartaa miirayaasha, xudduudaha, beddeli kartaa cabbirka sawirrada, ku dar qoraalka ...
Ma leh qarsoodi badan oo way fududahay in lala shaqeeyo, inkasta oo haddii waxa aad raadineyso ay yihiin halabuur aad u faahfaahsan, waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn.
Codsigan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee jira in wax laga beddelo sawirrada Instagram, ama wixii kale ee adeegsi ah guud ahaan. Waxaad yeelan doontaa miirayaal badan oo qalab iyo qalab, laakiin sidoo kale kuwa kale oo gabi ahaanba beddeli doona sawirradaada.
In kasta oo barnaamijkani uu lacag la’aan yahay, haddana waxaa jira nooc lacag la siinayo oo qalab aad u horumarsan leh horudhac ah iyo faahfaahinta kale ee, haddii aad guuleysato, ay mudan tahay inaad saxiixdo.
Waxay la mid tahay VSCO, laakiin waxay leedahay faa iidada ay ku yeelan karto hagaajinta codadka, yeelato shaandhooyin badan iyo hagaajinta sawirrada faahfaahintooda ugu yar. Waxaad haysataa nooca bilaashka ah, laakiin sidoo kale waxaa jira hoos u dhac taas, oo iska cad, ay ku fiicantahay tii hore.
Maxaa Snapseed ugu fiican? Hagaag waxay ku siineysaa hagaajinta HDR, markaad awood u leedahay inaad geliso qoraalka, waxay leedahay jajabyo badan ...
Sida loo tafatiro sawirrada Instagram: Lightroom
Barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dib u dhigto sawirrada heer xirfad leh. Xaqiiqdii, way dhammaystiran tahay inaad ka dhigi karto hagaajintaas inay uga gudbaan kuwa barnaamijka kombuyuutarka. Sababtaas awgeed, inbadan ayaa fursad siinaya arjiga.
Oo maxaad sameyn kartaa si aad ugu beddesho sawirro barta Instagram? Waa hagaag, inaad ku bilowdo, Waad dib u cusbooneysiin kartaa iftiinka iyo midabka, iyo sidoo kale astaamaha kale ee sawirka si loo hagaajiyo laydhkiisa, fiiqnaanta, iwm. Waxaad leedahay presets waadna abuuri kartaa taada.
Adobe Photoshop Taabasho
Photoshop waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee wax ka beddelka sawirrada, dabcan, waxay ahayd inuu lahaado nooca mobilka. Xaaladdan oo kale, qalabku aad buu u wanaagsan yahay maxaa yeelay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si ficil ahaan ah u sameyso sida kumbuyuutarka oo kale.
Haa, Waxaa loogu talagalay kuwa horeyba u lahaa khibrad, sababtoo ah bilowga qalabku aad ayuu u adag yahay in la isticmaalo, ugu yaraan si aad uga hesho waxa ugu fiican sawirradaada.
Ka hor intaadan la yaabin, waxay leedahay laba nooc, midka bilaashka ah iyo midka la bixiyay. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay barnaamij loogu talagalay taleefannada casriga ah iyo barnaamij kale oo loogu talagalay kiniinnada. Waxay aad isugu egyihiin midba midka kale, laakiin waxay diiradda saarayaan hagaajinta adeegsiga labada qalab.
Haddii aad leedahay xisaab Instagram ah oo diiradda saareysa cuntada, markaa barnaamijkani wuxuu noqon karaa midka kuugu fiican adiga. Waxayna ku wajahan tahay hagaajinta sawirrada saxannada iyo cuntada.
Waxaad ka heli kartaa labada Android iyo macruufka waana bilaash. Maxaad ku qaban kartaa? Waa hagaag waxaad ka heli doontaa miirayaal sawirrada cuntada (waxay leedahay in kabadan 20 nooc oo kaladuwan) iyo waliba aalado kale sida cilado, sawir qaadasho, iftiin si loo iftiimiyo cuntada marka sawir la qaadanayo ...
Google Play iyo App Store waxaa ku yaal codsiyo badan oo dheeri ah. Taladayada ayaa ah inaad isku daydo dhowr si aad uhesho midka ku habboon qaabka aad raadineyso. Miyaad kugula talineysaa wax intaa ka badan si aad wax uga beddesho sawirro barta 'Instagram'?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sida loo tafatiro sawirrada Instagram